हस्तमैथुन गर्नै पर्ने पाँच कारण « Deshko News
हस्तमैथुन गर्नै पर्ने पाँच कारण
हस्तमैथुन बारे फरक मानिसका फरक फरक धारण छन्। तर स्वास्थ्यका हिसावले भने हस्तमैथुन अत्यन्त स्वाभाविक र गैरहानिकारक यौन क्रियाकलाप हो ।
एक तथ्याङक अनुसार अहिले पनि ९४ प्रतिशत पुरुष र ८९ प्रतिशत महिला नियमित रुपमा हस्तमैथुन गर्दछन्। त्यसैले हस्तमैथुन गर्नु कुनै नराम्रो र अनैतिक होइन् । बरु हस्तमैथुनलाई कयौं दृष्टीले फाइदाजनक र उपयोगी मानिएको छ ।
यहाँ हस्तमैथुन गर्नै पर्ने ५ कारण प्रस्तुत गरिएको छ
१.हस्तमैथुन स्वास्थको लागि फाइदजनक छ
२. हस्तमैथुनले चरम आनन्द दिन्छ
हस्तमैथुनले सेक्स झैं मानिसलाइ चरम आनन्द दिन्छ। यसलेले मानिसलाई कल्पनाशिल बनाउँछ। हस्तमैथुनका क्रममा विभिन्न सेलेब्रेटिज, पर्नस्टार, अपरिचित सम्झिएर पनि आनन्द लिन सकिन्छ। यौन सन्तु्ष्टी हासिल गर्न पनि हस्तमैथुन पर्याप्त छ।
५. हस्तमैथुनले सेक्सलाई सहयोग गर्दछ
हस्तमैथुन आफैमा रोमाञ्चकारी अनुभव हो । यसले मानिसलाई सेक्सका बारेमा सिकाउँछ। हस्तमैथुनबाट तपाईले आफ्नो शरिरलाई चिन्न सक्नुहुन्छ भने सेक्सको क्षमता देखि तपाईलाई मन पर्ने यौन संवेदनाको आँकलन गर्न सक्नु हुन्छ ।